Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Saliid Fryer bilaash ah - Ra'yi iyo Waxbarasho
Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Saliid Fryers bilaash ah
Raadinta shiilan aan saliid lahayn Moulinex? Moodeelka Easy Fry Deluxe wuxuu noqon karaa doorasho weyn, sida uu leeyahay waxqabad aad u fiican iyo sifooyinka wanaagsan. Intaa waxaa dheer, mahadnaqa habka cunto karinta ee caafimaadka leh, waxay ku habboon tahay wanaaji cuntadaada.
Sidee buu u shaqeeyaa qaboojiyaha hawada?
Si aan kaaga caawino inaad go'aansato waxaan sameynay a falanqayn buuxda, markaa waxaanu kuu sheegi doonaa dhammaan faahfaahinta si aad u ogaato haddii ay buuxinayso shuruudahaaga: awoodaha, ra'yiga iibsadayaasha, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, iwm. Aan aadno halkaas
➤ Astaamaha Muuqda Moulinex Fudud Shiil
Aan hoos eegno sifooyinka ugu cajiibsan ee qalabkan iyo faa'iidooyinka aan ka filan karno.
Kani waa qaboojiyaha hawo qaada oo leh awood weyn oo ah 4,2 litir. Si kale haddii loo dhigo, waxaad fursad u heli doontaa inaad diyaariso qaybo kugu filan ilaa 3 ama 4 qof.
▷ 1500 Watts oo Awood ah
Awoodda isku dhafan waxay ku filan tahay 4,2 litir oo awood ah. Intaa waxaa dheer, kuwan 1500W waxaad ku gaari kartaa heerkul deggan ilaa 200 ° C, waxaana lagu hagaajin karaa ugu yaraan 80 ° C. Sidan ayaan ku heli doonaa natiijada ugu fiican mid kasta oo ka mid ah cuntooyinkayaga.
▷ Nadiifin Fudud
Waxay leedahay baaldi aad awoodid si fudud uga saar isticmaalka kasta ka dib. Sidaa darteed, gabalkan waxaa lagu dhaqi karaa gacanta ama makiinada weelka lagu dhaqo.
Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale nadiifin kartaa qalabka intiisa kale adigoo isticmaalaya maro qoyan, inkastoo tani aysan noqon doonin mid aad muhiim u ah, tan iyo habka shiilan. dhab ahaantii ma jiraan wax wasakh ah.
▷ Xakamaynta Dijital ah oo leh Bandhig
Isku dhafka a muuqaal dijital ah oo dareen leh kaas oo leh astaamo si fudud loo aqoonsan karo si loo xusho Barnaamijyo kala duwan ku habboon nooc kasta oo cunto karinta ah. Sidan, heerkulka iyo wakhtiga ayaa si toos ah loogu hagaajin doonaa sidaad dooratay.
ka Doorashada 8 Cuntooyinka caadiga ah ee horay loo sii qorsheeyay waa: hilib, jajab, shrimp, pizza, pie, kalluunka, dubay iyo dubay.
Habkani wuxuu leeyahay nidaam la taaban karo oo leh saxaarad laga saari karo cuntada. Qaab dhismeedkeedu waxa uu ka samaysan yahay bir aan bir lahayn iyo qaybo caag ah. Sidan oo kale, waxay awood u yeelan doontaa inay u adkeysato heerkulka sare, laakiin isla markaa waxay awood u yeelan doontaa inay iska ilaaliso gubashada.
Waxay leedahay dhamaystir nadiif ah oo qurux badan, iyo sidoo kale muuqaal aad u casri ah oo midab bir ah oo leh faahfaahin madow. Baaldigaagu waxa uu la socdaa khariidad aan dhegganeyn oo aan lahayn walxo sun ah sida BPA ama bisphenol A, markaa waxay kuu ogolaanaysaa inaad si badbaado leh u kariso.
CabbiradaDhererka 33,3 x ballac 27,8 x qoto dheer 33,3 cm
Miisaanka qiyaasta ah: 4,5 kiilo
Astaantu waxay bixisaa laba sano damaanad Haddii alaabtu leedahay cillado wax soo saar, laakiin sidoo kale shirkadu waxay caymisaa qaybo ka mid ah alaabta si ay u noqoto la hagaajin karo 10 sano.
➤ Qiimaha Fryer Moulinex
Qaabkani waxa uu ku jiraa kala duwanaansho qiimo ah qiyaastii 130 euro, iyada oo laftigeeda meel sare maraysa noocyada kale ee la aqoonsan yahay sida Tefal ama Philips.
Haddii aad xiisaynayso inaad ogaato waxa ay tahay qiimahaaga saxda ah hadda waxaad geli kartaa halkan.
Eeg Bixinta Hadda Ugu Fiican
4,2 L qaboojiyaha qaboojiyaha caafimaad qaba oo leh awood weyn iyo ilaa 6 qof; nidaamka dambiisha patented; u fiican shiil saliid yar, cunto karis caafimaad leh iyo wadaagis
Laga soo bilaabo baalasha digaaga ee qallafsan ilaa muffins chip shukulaatada, shiilan guriga lagu sameeyo ama dabada shrimp, dooro waxa aad ugu jeceshahay oo u daa alaabtu inay buuxiso baahiyahaaga.
Dahaarka aan dhegta lahayn si loo fududeeyo karinta cuntada iyo in kuwani aanay ku dheggan shiilan, fududaynta nadiifinteeda dambe.
8 borogaraam oo toos ah: chips, garoocad, prawns, keega, pizzas, kalluunka, dubay iyo dubay
Heerkulka la hagaajin karo ee u dhexeeya 80 ilaa 200ºC si loo helo natiijooyinka ugu fiican ee cunto karis kasta iyo saacad elektaroonig ah oo 60-daqiiqo ah leh, oo leh shaqo xidhid toos ah iyo feejignaan la maqli karo
Markaad iibsato qalabkan waxaad heli doontaa alaabtan soo socota:
➤ Isticmaalaha ayaa dib u eegaya Moulinex Oil Fryer bilaash ah
Habkani waxa uu ku guulaystay inuu qanciyo inta badan macaamiisheeda Amazon, maadaama lagu sameeyay dhibco ah 4,3 ka mid ah 5 xiddigood. Waxa kale oo ay leedahay in ka badan 20 dib u eegis iibsadaha, kuwaas oo 63% ay yihiin kuwo togan.
Fikradaha waxay inta badan diiradda saaraan dhinacyo ay ka mid yihiin fududeynta isticmaalka iyo sida ay u fududahay in la nadiifiyo karinta ka dib. Dib u eegisyada intooda badani waxay sidoo kale muujinayaan in diyaarinta cuntada ay ka dhalato cuntooyin macaan oo caafimaad qaba.
Su awood weyn Waa mid kale oo ka mid ah sifooyinka ay iftiimiyeen isticmaalayaashu, maadaama ay ogolaato in qaybo badan loo kariyo si hufan, degdeg ah oo la taaban karo.
Awoodeeda, sahlanaanta isticmaalka iyo tayada wanaagsan / saamiga qiimaha ayaa ka dhigaya qaabkan ikhtiyaarka ugu fiican ee kuwa raadinaya a naqshad casri ah waxayna rabaan inay diyaariyaan qaybo ka badan laba qof.
Marka la isku daro shaashadda taabashada dareenka leh, way fududahay in la hagaajiyo heerkulka iyo wakhtiga karinta sida aad jeceshahay. Intaa waxaa dheer, nidaamkeeda khaanadaha kaliya kama hortagayo inaan wasakhaynno maacuunta ka badan lagama maarmaanka ah, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud uga takhalusno dufanka. Sidaa darteed, tani waa fryer qoto dheer oo aad u fiican kuwa raadinaya raaxada a sumad sharaf leh.
Xakamaynta dhijitaalka ah oo leh bandhig
8 barnaamijyada karinta ee hore
Ma qiyaasi karno habka karinta
Haddii ay dhacdo in aad weli wax shaki ah qabtid nabad gelyo dheh! Hagaag, hoos waxaan ku siin doonaa jawaabaha su'aalaha ugu badan:
Sidee loo shiilaa? Waxay soo saartaa qulqulka hawo kulul oo awood u leh inay cunnada midabaynayso iyadoo la isticmaalayo wax yar ama saliid la'aan, sidaas darteed waxay keenaysaa qaab siman oo gudaha ah iyo qallafsanaan dibadda ah.
Kuwa shiilan ma iskood isu rogaan? Maya, haddii aad rabto inaad soo jeediso, waa inaad gacanta ku samaysaa kala badh inta lagu jiro karinta.
Halkeen ka heli karaa cuntooyinka Moulinex? Buuga cunto karinta waxa laga heli karaa mareegta astaanta.
➤ Soo iibso Saliida Moulinex Fryer bilaash ah
Kani Moulinex Easy Fry Deluxe ma yahay midka kuugu habboon? Haddii aad rabto inaad hubiso, waxaad ka iibsan kartaa guriga adiga oo gujinaya halkan:
Si aad online uga iibsato
(Codadka: 5 Celcelis: 4.2)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Moulinex
4 faallooyin ku saabsan "Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Fryers Saliid-La'aanta ah"
Isabel Fidalgo Isusi
10 / 07 / 2020 at 16: 24
Hadda ayaan hordhigay
Waxaan haystaa mid kale oo ka mid ah calaamad kale oo kuyan ah kanuna sidoo kale waa qumman yahay
Waxaan horeyba u aqaanay sida ay u shaqeeyaan waxayna u muuqdaan kuwo ku habboon nadiifinta degdegga ah iyo natiijooyinka
Inta soo hartay waa inaad u isticmaasho male-awaalkaaga natiijooyin cajiib ah.
Waa qumman yahay
10 / 07 / 2020 at 16: 52
Waad ku mahadsan tahay inaad nooga sheegtay khibradaada Isabel. Salaamu calaykum
30 / 07 / 2020 at 16: 41
Shiileeyaha waa mid cajiib ah oo si fiican u shaqeeya
30 / 07 / 2020 at 16: 58
Waad ku mahadsan tahay ka qaybqaadashada iyo dhiibista fikirkaaga. Salaamu calaykum